Iimpawu ezi-3 eziphezulu ezilahlekileyo kuPhando lweBlog kuGoogle? | Martech Zone
Iimpawu ezi-3 eziphezulu ezilahlekileyo kuPhando lweBlog kuGoogle?
NgoMvulo, Februwari 26, 2007 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Andisebenzisi ukuKhangela kwiBhlog kaGoogle. Isizathu kukuba ukuKhangela kwiBhlog kaGoogle kukulandela emva, hayi isixhobo sokulungiselela. Ngamanye amagama, kuya kufuneka ndenze isigqibo malunga nento endifuna ukuyenza ngaphambi kokuba ndiyikhangele. Kwiibhlog ezikhangela inkuthazo, awuyi kuyifumana apha! Unoko engqondweni, nazi izinto eziphambili ze-3 ezingekhoyo kuPhando lweBhlog zikaGoogle:
Uhlalutyo lwamagama aphambili. Yintoni le kuthethwa ngayo kumzuzu wokugqibela, iyure, usuku, iveki, njlnjl.
Uhlalutyo lokukhangela. Yintoni ekhangelwe kwimizuzu yokugqibela, iyure, usuku, iveki, njl njl.
Uhlalutyo lwejografi. Yintoni efunwayo kwaye phi?
Xa ndandindwendwele uGoogle kwiminyaka embalwa eyadlulayo, babenezikrini ezipholileyo kwindawo nganye yokungena kwikhampasi enikezela ngemibuzo yexesha lokwenyani. Babenaso nescreen esine-def-globe kunye nehlabathi elinemibuzo yenani lemibuzo ngolwimi kwihlabathi liphela. Kwakunomdla ukujonga (ithiyori yam yayikukuba ibingafakwanga naphi na kodwa ibikhazimla kwaye ipholile, kwaye i-3d ibambe wonke amehlo abatyeleli ngee 'oohs' kunye neeahah ').
Ukuba ungazibamba ngenene zonke ezo zibalo kwi-HDTV epholileyo, ngokuqinisekileyo ungabeka isicelo phaya ukuze sijonge. Kuya kuba mnandi kakhulu ukubona ukuba abantu babhala ntoni kwaye baphanda phi kwaye phi.
Ndiyayithanda iGoogle. Ndiyayazi uGoogle. Kodwa Google, awuyiyo iTechnorati. 🙂
PS: Umntu othile ovela eTechnorati ndicela undazise ukuba "Ulwabiwo lwemihla ngemihla API Iifowuni ”ngu? Nina niyandibulala kwaye akukho ndawo kwindawo yenu! Kuya kufuneka ndiphuhlise isicelo sonke ngokujikeleza i-server yesecaleni kwicala lesicelo ukuze ndingabeki ulwabiwo… nantoni na eyabelweyo… argh!
Enkosi, squidoo! (Shoemoney qaphela)
I-dnScoop ithi dnScoop.com ayixabisi kwaphela
Feb 26, 2007 ngo-11: 56 PM
Iifowuni ze-API zikhawulelwe kwiintsuku ezingama-500. Ndizamile ikhowudi yakho yewijethi, ipholile ngokwenene! Ukusetyenziswa endikucebisayo kukuyikhuphela ngaphandle kwekron (1) kube kanye ngemini kwaye uyipapashe kwifayile emileyo yeJavacript onokuyifaka. Umzekelo, ukuseta umzekelo endinokucinga ukuba yindawo apho iwijethi ipapashwa khona mihla le nge-1:
0 1 * * * / usr / yengingqi / bin / php /home/dkarr/web/rank_widget.php> /usr/local/apache/htdocs/js/rank_widget.js
(iindlela ezithile zenziwe kodwa ngethemba lokuba zibonelela ngesiqalo esihle)
Ngokubanzi, ukukala ukusetyenziswa kwe-API kunye nokukala ukugcwala kwewebhusayithi yakho kufuneka kuchithwe 😉
Ndiyathemba ukuba iyanceda,
Feb 27, 2007 ngo-11: 19 AM
Ewe, sele ndiphuhlisa uguqulelo 2 apho umsebenzisi anokugcina khona imveliso kwaye asete ukuphelelwa… mhlawumbi iiyure ezi-4 = 5 zokufowuna ngosuku… endaweni yama-500 🙂
Kananjalo ndiyayakha kwiwijethi yeWordPress. Ndingayandisa ibe ziifomathi ezahlukeneyo… njengethegi, ibadget, njl.
Nina bantu nifanele ukubeka i-API yomnxeba kwi-Community Community yakho ukuze abantu bazi ngayo.